Ukhuseleko olugqithise | Ezezimali
Okwangoku kukho ezinye izitokhwe ezithengwe kakhulu. Ukuziqhelanisa oko kuthetha into elula njengokuhamba ngamaxesha ambalwa apho amandla okuthenga akhulu kakhulu kangangokuba amaxabiso ahla enyuka kwakhona. ukungafumani abathengi bexesha elizayo. Kwaye baye babonakala emva kokubhengezwa kweziphumo zeshishini kwikota yesibini yalo nyaka kwaye khange ihlale nantoni na kakuhle ngokuxabiseka kwezabelo ngabahlalutyi beemarike zezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba bohlwaywe ngaphakathi kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba ifayile ye- I-Eurostoxx 50 Indawo yayo yokuqala yenkxaso ngamanqaku angama-3.600 kwaye, njengeethagethi, ngamanqaku angama-3.700. Kwimeko apho ezinye zokhuseleko zithengiwe kakhulu kwaye ke zisengozini yokuphulukana nenxalenye yoqingqo lwamaxabiso kwimarike yemasheya. Babheja kutyalo-mali olunganqweneleki kakhulu ukwenza izigqibo ukusukela ngoku. Kwaye ngenxa yezi zenzo, kufuneka sichonge ukuba zeziphi ezi xabiso zikhule kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo okanye nakwiminyaka. Kwimeko enzima kakhulu ukwenza ipotifoliyo yotyalo-mali eqinile kwiinjongo zayo.
Ngelixa kwelinye icala, kubaluleke kakhulu ukuvavanya ukuba kuyinyani na ukuba emva kovuyo okanye uloyiko lokuqala, kuyinto eqhelekileyo ukuba ixabiso lifumane ithontsi imigangatho ukuze uncike kuyo. Yeyiphi enye yeendlela zokuhamba rhoqo kwizinto ezigqithisileyo. Oko kukuthi, amanqanaba apho izikhundla zinokuthi zibuyekezwe zibuyele kamva ngamaxabiso aqine nangakumbi nokhuphiswano anokuthi avelise amandla amakhulu okuhlaziya. Ukusuka kulo naluphi na uhlobo lwezikhundla zotyalo-mali kunye nezicwangciso kunye nenjongo enye eyenye ngaphandle kokwenza ukonga okunenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo kwimisebenzi.
1 Ukhuseleko olugqithisileyo: Iberdrola
2 Iselfowuni engaphezulu ikhule kakhulu
3 I-Nokia enamathandabuzo aqhelekileyo
4 Injongo ye-Ferrovial yeenkampani zokwakha
5 I-Acerinox kwixesha elifutshane
Ukhuseleko olugqithisileyo: Iberdrola
Ukuba okwangoku kukho ixabiso eligxunyekwe kulo mkhwa, ayikho enye ngaphandle kwale nkampani yombane. Kwenzeke kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha ukusuka kwi-6 ukuya kwi-9 ye-euro ngesabelo ngasinye kunye nokuhlaziywa kwakhona malunga neepesenti ezingama-32. Apho kunokuba lixesha lokuthatha inzuzo kwaye uye kolunye ukhuseleko okanye nakwezinye iiasethi zemali. Akumangalisi ukuba sele ibonakalisa iimpawu zokuqala zobuthathaka ezinokukhokelela kwimeko yokuqala kumanqanaba ee-8,50 ze-euro. Ukusuka apho inokuthi iye kumanqanaba athozamileyo kwaye ekuphenduleni kukonyuka kwamava eeuros ezili-18 ezidlulileyo.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba i-Iberdrola icacile kwaye ihlengahlengise kunikezelo nakwimfuno yezabelo zayo. Le nto inokukhokelela ekuqalekeni kwezilungiso ezibalulekileyo ezinokuthatha ziphantsi kakhulu kwizikhundla ezikhoyo kulungelelwaniso lwamaxabiso akho. Njengokuba injalo into yokuba ukuthengisa uxinzelelo sele kuqalile ukwakha kwaye inokusetyenziselwa ukuthenga amasheya ngamaxabiso aphantsi. Ukusuka kulo naluphi na uhlobo lweqhinga lotyalo-mali kwaye olunokubakhuthaza abatyali mali ukuba baphume kwizikhundla zale nkampani yombane.
Iselfowuni engaphezulu ikhule kakhulu
I-teleco lixabiso le-Ibex 35 elixabise kakhulu ukusukela ekuqaleni konyaka. Izisa umdla kwimisebenzi malunga ne-40%, Ipesenti encinci kakhulu ekhoyo kwiinkampani ezidweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Esi sesinye sezizathu esenza ukuba sesichengeni sokulungiswa kwamaxabiso, ubuncinci ukusuka kwi-50% kunyuso lweenyanga ezidlulileyo. Kungenxa yokuba ngelishwa, kunokuba lixesha elide ukungena kwizikhundla zabo ukusukela ngoku. Ngaphandle kwento yokuba ikhokelele ekunyukeni kwamaxabiso enza i-Ibex 35.
Kwaye akunakugwetywa ngaphandle ukuba uxinzelelo lokuthenga kumthengisi luyaqhubeka, nangona kunokubakho ukuphinda kuhlaziywe kunye nokusikelwa umda ngakumbi kunangaphambili. Ukusuka kule meko, akukhutshwa ngaphandle kokukhawuleza ukutsala phezulu oko kukhokelela ekunciphiseni okukhulu kumaxabiso abo. Ngaphandle komdla wokuba le nkampani yefowuni inokuvusa phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho elinye lamaqhosha liya kuba loloyiso lokuchasana nokubaluleka okubaluleke kakhulu kwixabiso eliphambi kwalo kwaye iya kuba yindawo yezehlo ukuze isenzo sayo sikhokelwe kwicala elinye okanye kwelinye kwiinyanga ezizayo.
I-Nokia enamathandabuzo aqhelekileyo
Ngaphakathi kweli qela likhethiweyo, abatyali mali abanakulibala eli xabiso, nangona liphulukene namandla kwiiseshoni zokurhweba zamva nje. Ngayiphi na imeko, isebe lohlalutyo lweBhanki libonisa ukuba inkampani edwelisiweyo inayo ukubonakala okuphezulu kwintengiso, nenqanaba lokugubungela i-90% ngaphezulu komgangatho ophakathi ekujoliswe kuwo enyakeni, kodwa uwufanele unyaka njengowenguqu "ngokwenguqu" ngokwenzuzo. Ukuqinisekisa ukuba ukungavisisani kwezorhwebo yenye yezinto ezichaza ngokuyinxenye ukonyuka kweendleko zonikezelo. Ngaphandle kwayo yonke into, kuninzi ukubanjwa kunokuthenga, nangona kungenakulityalwa ukuba lelinye lawona maxabiso aguquguqukayo kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain.
Ngayiphi na imeko, sesinye sezindululo esinzima kakhulu kwiimarike zengeniso yesizwe ukuba zisebenze. Le nyani ingenxa yenyani yokuba kumaxesha amaninzi ukungazithembi kugqithise ngokwenene ngokwahluka okuphawuleka kakhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi. Kwaye ukuya kwinqanaba lokufikelela kwinqanaba elingaphezulu kwe-5% okanye nangaphezulu. Oko kukuthi, kulungile kakhulu kwimisebenzi yokurhweba, kodwa hayi ukuseta utshintsho oluncinci okanye oluzinzileyo lokonga ixesha eliphakathi nelide. Apho unokufumana khona imali eninzi ngezi ntshukumo, kodwa ngenxa yezizathu ezifanayo, shiya i-euro eninzi ngasemva.
Injongo ye-Ferrovial yeenkampani zokwakha
Phakathi kweenkampani ezidwelisiweyo kwicandelo lokwakha, le yeyona igcina imeko ethe kratya yokunyuka, ngakumbi kwiinyanga ezidlulileyo. Ngoxinzelelo lokuthenga olusentloko yabameli be-Ibex 35. Ngale ndlela, iqhinga lotyalo-mali elinokusetyenziswa ukusukela ngoku Thatha ithuba lokulungiswa ukuthatha izikhundla kwixabiso, nokuba kukuloo mbambano. Ngenxa yokuba ukubanakho ukuphonononga yenye yezona zinto zicetyiswayo ziboniswe yi-Ibex 35 kwaye nakweyiphi na imeko ingentla kwezo zinikezelwa ziinkampani zeli candelo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwesi sicelo sotyalo-mali kwii-equity zaseSpain kukuba ixabisile phantsi kwamanani amabini ukusukela ekuqaleni konyaka. Ngenzuzo kwisabelo ngasinye esaziwa kakhulu ngabahlalutyi abaphambili beemarike zezemali. Ngenxa yenyani yokuba inemigca eyahlukeneyo, zombini kwiimodeli zayo nakwimimandla yejografi apho batyikitye izivumelwano zomsebenzi. Ngamafutshane, lukhetho olunganikezeli ngomngcipheko ogqithileyo kwiinyanga ezizayo, ngakumbi ukuba zikhatshwa yindlela elungileyo yeemarike zezabelo. Ngaphandle kokugweba ukuba inokufikelela kwizabelo eziphezulu kakhulu ukusukela ngoku ukuya phambili.
I-Acerinox kwixesha elifutshane
Ubume be-steelmaker yaseSpain bukhetheke okhethekileyo kuba, nangona imeko yayo ingabalulekanga kangako, kukwithuba nje elifutshane. Ngamandla okunyusa amaxabiso anokubangela umdla kakhulu kulindelo lwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngombono oqhelekileyo wokuba kwiiveki ezimbalwa inokusondela kumanqanaba ee-euro ezingama-11 ngesabelo ngasinye kulapho ke ikwazi ukuxhathisa ngamandla. Ngayiphi na imeko, eli ayiloxabiso lokuba nayo ixesha elide, kodwa ngokuchaseneyo yenzelwe imisebenzi ethile kwaye ilawulwa kakuhle ebusweni bento enokwenzeka kwiimarike ze-equity.
Ukongeza, ayinakulityalwa ukuba kulo nyaka inyuse isivuno sayo malunga nesiqingatha sepesenti. Oku kuthetha ukuba xa uziqhelanisa unokufumana imali emiselweyo eqinisekisiweyo minyaka le nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezemali. Nangona ngaphandle kokufikelela kwinqanaba leenkampani zombane ezibonelela ngenqanaba lenzala ngalo mbono kufutshane ne-7%. Apho kuyindlela yokusondela kutyalo-mali kule nkampani ukusuka kwindlela ethembekileyo okanye ekhuselayo kunakwamanye amaxabiso e-Ibex 35. Kwelinye lawona macandelo ajikelezayo onke, oko kukuthi, asekwe kulindelo Benza kuqoqosho lwamanye amazwe. Kwaye ngenxa yesi sizathu baguquguqukayo kunabanye, ngakumbi kumaxesha angathandekiyo kolu didi lweeasethi ezizodwa zemali. Kwaye yenye yeenjongo kutyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ukhuseleko oluthe kratya